izinhlangano ezingokomthetho njengezikhonzi zoMbuso emthethweni civil - kuyinto isakhiwo zomthetho ezithakazelisayo futhi eziyinkimbinkimbi. Onjalo ngokugqamile isici mkhuba alichaza indima ukuthi ubuhlobo lezi ababambiqhaza ukudlala kwetinhlavu kanye nokusebenza komthetho civil.
izinhlangano ezingokomthetho njengezikhonzi zoMbuso komthetho we-civil zihlobene maqondana abantu zemvelo. Kvazipodchinennoe isikhundla kunqunywa kuphela yokuthi izakhamuzi nezinye abadlali yasekuqaleni Unelungelo ukuhlela, ukuphatha, kanye ukulawula imisebenzi yabo. Nokho, kusukela ngo-ukubhaliswa wesibili isikhundla uyashabalala. Yingakho-ke kunengqondo ukucabanga izinhlangano ezingokomthetho ngaphezulu.
Ngokuvamile, abameli endow lezi eduze kwezihloko izinga izici, phakathi lapho abalandelayo okunabileko:
- Kuba njalo inhlangano, ekufezeni imisebenzi ngokuhambisana idokhumenti eziyisisekelo. Ingqikithi kunqunywa kuye ezahlukahlukene kwezomnotho, izinkinga zakho siqu kanye zomthetho.
- Sinenkosi isakhiwo njalo, izinguquko okuyinto ziyabonakala kule dokhumenti kakade ngenhla. Lesi sici kakhulu liphinyiselwe umthetho lamazwe nge elawulwa ngandlela-thile umnotho.
- Umuntu lomthetho ngeke ukusiza kodwa abe impahla, eqinisweni uqinisekisa ukugcwaliseka izibopho. Ngaphansi impahla ngokuvamile baqonde inhlokodolobha kokuqala, uzwakalise kokubili imali kanye ezintweni.
- It ngaso sonke isikhathi wenza egameni yayo ubudlelwane yombango, noma kunalokho, ukukhonza iziphathimandla zalo abanekhono ngesisekelo insimbi eyisisekelo.
- Kuyinto obangela izibopho kuphela efeni.
abantu Legal njengoba izikhonzi komthetho we-civil umahluko kuncike eziningi izici, okubizwa ngokuthi izici labafanelekako. Futhi ngenxa yokuthi i-division Kwenziwa kanje:
- izinhlangano zikahulumeni nezizimele, ama cooperatives nezinhlangano ezingekho ngaphansi kukahulumeni. Kulokhu, lo division wenziwa ngendaba izikhungo futhi okungazange kube ingxenye umthetho osebenza ku umuntu othize.
- Commercial futhi engenzi-nzuzo: ukwahlukana eyenziwa ngesisekelo ukusungulwa kanye nemisebenzi lenkampani.
- Izinhlangano, izinkampani, izinkampani, izinhlangano zabantu, izikhungo. ukuzihlukanisa kwabo kwenziwa ngesisekelo kwezinhlangano indlela - okudalwe noma ukuhlanganisa akhona.
- ngezigaba esekelwe lwebhizinisi kusho ukuthi ezizimele of ubudlelwano zomthetho, njengoba umthetho, yiba endaweni eyodwa evelele wokusebenza. Ngokwesibonelo, kungaba sphere kwezenhlalo, commercial noma amasiko.
ngezigaba okunjalo yehlukene kaningi okubalwa inenani esisebenzayo ukuthi ukunquma ekupha iziqondiso ezidingekayo ngawo umuntu ngeke okufinyelela imigomo isethi e idokhumenti eziyisisekelo.
Isimo sezomthetho mayelana Nelungelo mkhuba
amalungelo Legal nezibopho lale ndaba akhuluma ngayo azisafani ukuthi esivela kubantu ngokomzimba.
gradirovanie okunjalo kusekelwe ezihlukahlukayo amazinga amandla. Ngakho, umthetho omiswe uhlu isimo izinhlangano ezingokomthetho unelungelo isebenze kuphela endaweni ethile. Ikakhulukazi, leli lungiselelo osebenza ku zikamasipala kanye nesimo maqondana nalapho isimiso focus egxilile e imisebenzi.
Kodwa lokhu umehluko akusho anqamule. Isici of inhlangano engokomthetho yesibili uba isikhathi nesenzakalo amalungelo ngakhoke yemfanelo. Kuze kube yimanje, isihloko efika ngokugcwele lokubhalisa, onikeza ilungelo ukuqhubeka ngaphandle kokulibala ukugcwalisa imisebenzi ku isimiso.
Ngokusekelwe kulokhu okungenhla, singaphetha ngokuthi izinhlangano ezingokomthetho njengezikhonzi zoMbuso emthethweni civil - umklamo yehlukene kaningi okubalwa, ngenhloso ukuba khona okuyinto ukugcwaliseka kwezinjongo ezibekwe yi-abasunguli balo kwamkhanyela isimo sokubhaliswa.
Umthetho Inkontileka njengoba ngesisekelo kwesokudla European
Iyini iphrojekthi. Incazelo yephrojekthi, izici zayo nezici
Ukubhoboza - kuyini? indlebe Ukubhoboza